Ulexite, dhagaxa telefishanka, saamaynta TV - TV Rock - fiidiyow
Ka iibso dukaanka 'ulexite dabiiciga'
Ulexite, kaariyamka kaalshiyamka leh kaalshiyamka borate hydroxide, oo mararka qaar loo yaqaan 'Rock Rock', waa macdan ka dhacda bulukeetiyada cufan ee iftiinka leh ama xargaha isbarbar dhiga. Xargaha dabiiciga ah ee ulexite waxay iftiin ku sameeyaan wejiyadahooda dhaadheer, iyagoo ka tarjumaya gudaha.
Ulexite waa macdan qaab dhismeed ahaan adag leh, oo leh qaab dhismeed asaasi ah oo ay kujiraan silsilado sodium, biyo iyo octahedra hydroxide. Silsiladaha waxaa lagu xiraa kaalshiyamka, biyaha, hydroxide iyo polyhedra ogsijiinta iyo unugyada boron aad u ballaaran. Waxay ka kooban yihiin saddex bareelo oo ku habboon iyo laba qaab saddex geesood ah.
Ulexite waxaa sidoo kale loo yaqaanaa dhagaxa TV-ga sababtoo ah sifooyinka indhaha ee aan caadiga ahayn. Fiberka ulexite waxay u shaqeeyaan sidii fiilo ufiican, oo gudbinaya iftiinka dhererkooda iyadoo la eegayo gudaha. Marka qayb ka mid ah ulexite loo jaro wajiyada midabeysan oo siman gaar ahaan jihaynta fiilooyinka, muunad tayo wanaagsan leh ayaa soo bandhigi doonta muuqaal ah waxkastoo dusha sare ka xiga dhinaca kale.
Saamaynta fiber optic-ku waa natiijada ka dhalata iftiinka unugyada iftiinka gaabiska ah ee degdegga ah ee galab kasta, muuqaalka gudaha ee ray-ga-gaaga iyo dib-u-milicsiga iftiinka degdegga ah ee loo adeegsado iftiinka gaabiska ah ee fiber-ka xiga. Cawaaqib xiisa leh ayaa ah jiilka sedex cones, oo labo kamid ah ay yihiin kuwa la isku haysto, markii laser beam uu sifiican u iftiiminayo fiilooyinka. Koontadaani waxaa la arki karaa markii laga fiirsanayo il iftiin ah oo loo maro macdanta.
Dhagxaanta telefishanka / TV-ga
Isugeynta isku-darka ah ee fiber ee mashruuca ulexite waa sawir shay ah oo ku yaal dusha ka soo horjeedka macdanta. Hantidan indhaha ah ayaa caan ku ah fiiloyin isku-darka ah, laakiin aan ku jirin macdan qodista, iyagoo siinaya ulexite naanays TV Rock. Hantidan indhaha ah waxaa sabab u ah dib-u-eegida oo ay la socoto fiiloyin mataano ah, diyaaradda mataanaha ugu caansan ee socota. Iftiinka ayaa gudaha ka muuqda kana muuqda gudaha fiilo kasta oo ku hareereysan dhexdhexaad hoose oo tusaha milicsiga. Saameyntan indhaha ayaa sidoo kale ah natiijooyinka meelaha ballaaran ee ay sameysteen silsiladaha sodium octahedral ee qaab dhismeedka macdanta. Xadhkaha silica ee loo adeegsado fiber optics-ka ayaa gudbinaya sawirro leh xirmo khariidooyin u eg mid lamid ah sida dabiiciga ah ee ku dhaca 'ulexite' waxayna soo saartaa sawirrada iyadoo ay ugu wacan tahay jiritaanka tusmooyin kala duwan oo ku saabsan fiirsashada. Intaa waxaa sii dheer, haddii sheygu midabeysan yahay, dhammaan midabyada ayaa lagu soosaaray ulexite. Dusha sare ee barxadda leh ulexite cut oo kuxiran fiilooyinka waxay soosaaraan muuqaalka ugu fiican, maaddaama ay ku kala durugsan tahay cabirka muuqaalka la saadaaliyay inay dhici doonto haddii dusha sare aysan barbar dhigeyn macdanta. Waxaa layaab leh, tusaalooyinka dhagaxa ah waxay awoodaan inay soo saaraan muuqaal hufan, oo xun. Satin spar gypsum sidoo kale waxay soo bandhigaysaa saameyntan indhaha. Si kastaba ha noqotee, fiilooyinka ayaa aad ugu adag inay gudbiyaan muuqaal wanaagsan. Dhumucda fiberku waxay u dhigantaa ballaarinta muuqaalka la saadaaliyay.
Ulexite waxay ka caawisaa bogsashada iyo isku dheelitirka aragga jirka. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu caawiyo xoojinta araggaaga isla markaana looga gudbo daalka indhaha ee lumaya ama aragti labalaabaysa.
Waxay ka saari doontaa laalaabkii, waxay fududeyn doontaa madax xanuun.
Dhagxaankani wuxuu gacan ka geysan doonaa kahortagga dhibaatooyinka ka yimaada nidaamka dareemayaasha, gaar ahaan toobka oo aan la sharixin xanuunka dareemeyaasha. Ulexite waxay horumarin doontaa xusuustaada iyo feejignaantaada.
Ulexite, wuxuu ka yimid Boron, California, USA